Wasiir C/raxmaan Xoosh oo la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir C/raxmaan Xoosh oo la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed (SAWIRO)
Wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa maanta booqday xarunta baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku taallo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa sidoo kale magaalada Baydhabo kullan kula yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Mudane C/qaadir Shariif Sheekhunaa iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaas.
Wasiir Xoosh ayaa ugu horeyn uga mahad-celiyay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed soo dhaweynta uu u sameeyay, isagoona uga warbixiyay howlagalka ay haatan u joogaan magaalada Baydhabo.
“Guddoomiye aad ayaan kaaga mahad-celinaynaa soo dhaweeynta diirran ee aad noo sameeysay, waxaan adiga iyo guddiga idinku nimid inaan idinkaga warbixino habka aan ku galeyno hannaanka dib-u-eegista dastuurka Qaranka, aad ayaana ugu baahannahay inaad talladiiina nala wadaagtaan” Sidaas waxaa yiri Wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil.
Dhinaca kale, wasiirka ayaa baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo dhamaan hay’adaha maamulkaasi ku ammaanay horumarka ay durbaba gaareen, isagoona ka codsaday in gacan laga siiyo geedi-socodka taariikhiga ah ee dib-u-eegista dastuurka oo muhiim u ah dhamaan dadka Soomaaliyeed.
“Waxaa maanta sharaf inoo ah in kullamadii wadatashiga mid kamid ah aan ku qabano magaalada Baydhabo, waxaa dhinaciina idinkaga baahannahay inaad taladiina ku darsataan qabyo qoraalka qorshaha guud ee hannaanka dib-u-eegusta dastuurka ee aan diyaarinayno” Ayuu hadalkiisa raaciyay wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil.